Banaanbaxyo maanta ka dhacay qeybo ka mid ah G/Gedo. – XAMAR POST
Banaanbaxyo maanta ka dhacay qeybo ka mid ah G/Gedo.
By Mohamed Abdi On Feb 28, 2022
–Shacab badan oo ku dhaqan Gobolka Gedo ayaa maanta iskugu soo baxay Banaanbaxyo Magaalooyinka Beledxaawo iyo Doolow, iyagoo ay ku dalbanayeen in magaalada Garbahaarey oo ka tirsan gobolkaas lagu qabto doorashada kuraasta 16-ka ee taala.
Sidoo kale, dibadbaxayaasha ayaa xusay in Magaalada Garbahaarey lagu qaban karo doorasho islamarkaana ay nabad tahay, iyagoo madaxda dowladda ugu baaqay in ay go,aamiyeen in doorashada lagu qabto magaaladaas.
Shacabka dhigayey dibad-baxa oo ahaa kuwa careysan ayaa ku qaylinayey erayo ay ka mid yihiin, Musuq-maaquq doonimeyno, Dollar qaate dooni meyno iyo erayo kale.
Sidoo kale, Dibad-baxaan ayaa looga soo horjeeday in la boobo doorashada kuraasta deegaan doorashadoodu tahay Magaalada Garbahaarey.
Maamulka Jubbaland ayaa horey u sheegay in aysan suurta gal ahayn in doorasho lagu qabto Garbahaarey iyagoo u sababeeyay faragalin dowladda ay ku heyso, maadama ay xuseen in ciidamo gaar ah oo Villa Soomaaliya ka amar qaata ay ku sugan yihiin Magaaladaas.
Ruushka oo ka hadlay khasaaraha kasoo gaaay dalka ka socda maalintii Shanaad Ukraine.
Ergo ka kala socota Ruushka iyo Ukraine oo lagu wado in goor dhaw ku kulmaan dalka Belarus.